Vidim-bary sy ny hafa : avy any am-potony ny antony | NewsMada
Vidim-bary sy ny hafa : avy any am-potony ny antony
Nitondra fanazavana ny mpandraharaha iray mpanafatra entana, i Molou Nazavaly, fa nisondrotra avokoa ny vidin’ny vary, ny lafarinina, ny menaka, ny siramamy eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, nanomboka ny jolay 2020 hatramin’izao janoary 2021 izao. “Niakatra tsikelikely ny vidin’ireo entana ireo hatramin’ny nisian’ny valanaretina Covid-19, ary nitombo be ny vidiny ny faran’ny taona 2020”, hoy ihany ity Karana mpandraharaha ity.
Nambarany fa avy any amin’ny tany fiavian’ireo entana ireo ny fiakaram-bidy, miampy ny haba isan-karazany, indrindra fa nitombo avo roa heny na telo heny ny saram-pitaterana. Ankoatra izay ny fahasarotan’ny fahitana kaontenera sy ny hofany. « Ny vary, ohatra, avy any Inde, koa raha nofana 900 dolara teo aloha ny kaontenera mahazatra (20 pieds), tamin’ny desambra 2020 teo, lasa 2 700 dolara. Ny lafarina, avy any Ukraine, avy any Rosia; ny siramamy, avy any Brezila. Izany hoe, samy avy lavitra ny fanafarana ireo”.
“Tsy maintsy manaraka ny fisondrotry ny entana eto an-toerana. Olana eo anivon’izao tontolo izao izany, izay atrehin’ny firenen-drehetra, ankoatra ny Ariary mihen-danja”, hoy ihany i Molou Nazavaly. Koa raha mbola tsy ampy ny voka-bary eto an-toerana, sy ny vokatra hafa, mbola ho nofinofy vao afaka amin’izao fahasahiranana izao. Izay no maha laharam-pahamehana hatrany ny fambolena sy ny fotodrafitrasa miaraka aminy raha tadiavina marina ny fampandrosoana.